तथ्यांक भन्छ– संक्रमण समुदायस्तरमै विस्तार – The Public Today
तथ्यांक भन्छ– संक्रमण समुदायस्तरमै विस्तार
विजय कुमार सिंह भदौ २०, २०७७ ८:०६ am
काठमाडाैं, भदौ २० गते । पछिल्ला तथ्यांकहरूले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै विस्तार भइसकेको देखाएका छन् ।
पछिल्लो सात दिनको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट (पीपीआर) बिहीबार गणना गरेर हेर्दा उपत्यकाको औसत ११.७० को हाराहारीमा छ भने देशभरको औसत ८.७ छ । जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार पीपीआर ५ भन्दा माथि भए त्यसले संक्रमण समुदायस्तरमा व्यापक भएको वा परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन नसकेको दर्शाउँछ ।
उपत्यकाको पछिल्ला सात दिनको पीपीआर एक दिनबाहेक दोहोरो अंकमा छ जुन आवश्यक मापदण्डभन्दा दुई गुणा बढी हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका देशहरूलाई जनजीवन सामान्य रूपमा फर्काउनुपूर्व १४ दिनसम्म पीपीआर ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यो संख्या बढ्नुको मतलब हामीकहाँ लक्षण देखिएर वा कुनै समस्या भएर परीक्षण गराउन पुगेकाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ, समुदायस्तरमा परीक्षण भएको छैन भन्ने पनि हो । एकातर्फ देशैभर संक्रमण फैलने दर उकालो लाग्दै छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या भदौ १४ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा १४ दिनमा दोब्बर भएको छ ।
उपत्यकामा पछिल्लो दुई साताको तथ्यांक केलाउँदा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुने दिन घट्दै गएको छ । बिहीबारको तथ्यांकअनुसार करिब ९ दिनमा उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने देखिन्छ ।
देशभर संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय पनि घट्दै गएको छ । दोब्बर हुन लाग्ने समय जति घट्दै गयो, संक्रमण उति तीव्र भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।
साउन ६ गते लकडाउन अन्त्य भएको दिन देशभर संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुने दर ८२.५ थियो । जसको मतलब करिब ८२ दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन्छ भन्ने अनुमान हो । तर, त्यो गणितीय अनुमानलाई धेरै पछि छोड्दै करिब ४० दिनमै संक्रमितको संख्या दोब्बर भयो । तथ्यांक विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट स्टाटिस्टा डटकममा भदौ १५ मा प्रकाशित रिपोर्टमा भदौ १४ गतेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन ३४ दिन लागेको थियो । जबकि सोही रिपोर्टका अनुसार विश्वमा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन ५० दिन लागेको देखिन्छ ।
भदौ १६ गतेसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा अबको अवस्थामा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन करिब २६ दिन लाग्न सक्छ । हाल धेरै संक्रमित देखिएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा भए पनि संक्रमित हुने क्रम घटेको छैन ।
यी सबैभन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति मृत्युको हो । स्टाटिस्टा डटकममै भदौ १५ गते प्रकाशित अर्को एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भदौ १४ गतेको तथ्यांकअनुसार १४ दिनमै दोब्बर भएको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपाल जोखिमको हिसाबले नवौं स्थानमा पर्छ । सबैभन्दा माथि बोत्सवाना रहेको छ, जहाँ ४ दिनमा मृतकको संख्या दोब्बर भएको थियो । विश्वमा मृतकको संख्या दोब्बर हुने औसत दिन ७९ छ । सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको चीनमा मृतकको संख्या दोब्बर हुन १९० दिन लागेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जोन हप्किन्स हेल्थ सिस्टममा कार्यरत क्वालिटी म्यानेजर तथा चिकित्सकीय एनालाइटिक्स विज्ञ डा. विशाल भण्डारीका अनुसार अंकहरूले देखाएको परिदृश्यलाई बदल्ने हो भने सोहीअनुरूप योजनाहरू बनाउनुपर्छ । ‘भदौ १६ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा संक्रमितको संख्या नेपालमा दोब्बर हुन २६ दिन लाग्ने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ९ दिनमा यो संख्या दोब्बर हुने देखिन्छ । त्यो भनेको अहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो भने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरी काम गरियो भने त्यो अनुमानमा पनि फरक पर्छ ।’
डा. भण्डारीका अनुसार अंकका आधारमा गरिने विश्लेषणले भविष्यमा आइपर्न सक्ने स्थितिको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुग्छ र सोहीअनुसार तयारी गरे गम्भीर अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । ‘त्यसका लागि हामीले के–के तयारी गर्नुपर्छ भनेर अहिले नै योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने दरले पूर्वतयारीका लागि केही समय प्रदान गर्नुका साथै अस्पतालहरूलाई बेड तथा अन्य आवश्यक सामग्री तयार गर्नका लागि पनि समय दिन्छ ।
यस्तै विज्ञान विषयका अध्येता दोर्जे गुरुङका अनुसार नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा संक्रमण तीव्र रूपमा समुदायस्तरमा फैलिन थालेको हो कि भन्ने देखाउँछ । ‘नेपालको पीपीआर निकै माथि छ र बढ्दै गइरहेको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने, ‘पीपीआरको रेटसँगै परीक्षणको दर पनि बढिरहेकाले यो थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार पीपीआर मात्रै बढेको तर परीक्षणको दायरा भने एकनास रहेको भए संक्रमित नबढीकन परीक्षण नपुगेकाले हो भन्न मिल्थ्यो र परीक्षणको दर बढाउनेबित्तिकै अंक सामान्य अवस्थामा आउँछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । तर, पीपीआर र परीक्षणको दर समान रूपले उकालो लाग्नु भनेको समुदायस्तरमा संक्रमण पुगिसकेको संकेत हो ।
उपत्यकाको पीपीआर ११ भन्दा बढी र देशकै पीपीआर ९ को हाराहारी हुनुले समुदायमा संक्रमण रहेको मान्न सकिने जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपाने पनि बताउँछन् । ‘यो ठोकुवा गर्न त मिल्दैन तर समुदायमा संक्रमण नभईकन यति धेरै अंक आउँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई थप पुष्टि गर्नका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनुपर्छ र परीक्षणको दर अझै बढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सबै जनाले घरबाहिर निस्किँदा मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नेजस्ता रोकथामका आधारभूत नियम पालना गरे धेरै हदसम्म अंकगणितको भविष्यवाणीलाई पर धकेल्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने मुलुक र समुदायमा संक्रमण गइनसकेको बताए । ‘देशभर नै समुदायस्तरमा संक्रमण छ भन्ने अहिले देखिँदैन तर केही जिल्लामा भने समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको छ भन्न सकिन्छ,’ शुक्रबार स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले छिट्टै सेरोप्रिभेलेन्स टेस्ट पनि गर्न लागेका छौं । त्यसबाट पनि अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा स्वरूप आचार्यले खबर लेखेका छन् ।